Semalt Nyanzvi Inoratidzira 13 Tsika Dzakadzika Dzose Dzakabudirira Bhizimisi Rinoongorora Rinotsvaga
6FC5370-0AA00-2AA0 SIEMENS.5;color:#5f5f5f;text-align:justify;font-style:italic"> Kune vamwe vanhu kubudirira kunogona kuita sokusimudzabhegi rejecha, asi kune vashomanana, inongova tsika. Zvinogoneka sei?
Nhanho yekutanga ndeyokuuraya kutya, kunobva mupfungwa yekukundikana, nekukumbiranguva dzose uye kuronga zvakanaka. Mutungamiri Wakatungamira Muchengeti Wakabudirira we Semalt ,Igor Gamanenko anotaura kuti makore ehuchiitiko aya anokosha sezvaanoitavakabatsira pakuzadzikiswa kwemishonga yakawanda. Heano mazano gumi namatatu pane chiikuti aite kuti kubudirire mune bhizinesi, kuti nyanzvi inogoverana kuveza pane zvakaitikawekuita basa rinobudirira muSemalt.
Unofanirwa kuva nemufananidzo mukuru wezvaunoda kubudirira kubva pane pfungwadanho kusvika pakugadzirisa kwekupedzisira uye kuongorora. Panguva imwe chete, iyozvakakosha kunzwisisa nhamba yevanhu vamunoda kuita, iteknolojia yeunoronga kushandisa, motokari inobvumira kutumira zvosevanhu uye teknolojia. Tsanangura zvinangwa zvevatengi, chiremera chekutongauye benchmark inotengeswa iyo ichasimbisa purogiramu kana kuti zvingasarudzwaiyo yekutanga kwechinguva kusvikira iwe waputsa kunyange napfuura.
Mushure mokunge maitwa nemapikicha ekufungidzira, kuronga zvakakwana kwezvosezvikamu zvakasiyana zvepfungwa yako zvinoitwa. Kubva pane zvakakosha zvikurukune zvishoma, zvose zvinorehwa zvinorehwa zvinofanira kuenzaniswa zvakafanana.Icho chinonyanya kukosha kwegadziriro iyi ndeyokufungidzira zviri nani chiinguva iyo ichakutora iwe kuti uite chinangwa chako chakanga chisina kunakainotsanangurwa panguva yekufunga.
Ichokwadi, iwe unofanirwa kuziva imwe nzira yakasiyanaruzivo, asi izvozvo hazvina kukwana kuti uve nechokwadi chekubudirira kwako.Nokudaro, chido chekutsvakurudza zvakadzama hachidziviriki sevamwezvisizvo zvingasave zvakasununguka kwamuri kubvira pakatanga kana zvinhuyakasiyana, uye iwe unoda kuzviziva..Zvakare, zvichienderana neruzivo rwaunoda, kuwedzerwa kwemashoko kunofanirangazviitwe zvakakodzera. Mukuguma, ruzivo rwechokwadi nderwezvinonyanya kukosha kuitira kuti, iwe usaparadze zvigadzirwa nenzira isina kururama.
Ita tsvakurudzo pamusoro pemashoko aunazvo, vimbisekutendeseka uye kuenzanisa nechinangwa chekufungidzira seisu tataura kare. Pakazoratidzwa, kusagadzikanazvakakosha zvikuru pakarepo kusvika pane zvakanyanya zvinokonzeraKutendeseka kwemashoko akachengetwa.
Tsvaga Zvimwe Zvimwe
Paunouya nemashoko ose,zvinotora nguva kuti utarise-tarisa uye uone kanakune dzimwezve dzimwe nzira dzakanakisisa dzekunakakuzadzisa mhinduro imwe chete kana iri nani. Chii iwefunga? Iwe unofunga chinangwa chevatengi kanavatengi kutanga, kwete mari, nguva kana zvigadzirwa.Mushure mekunge majekesa izvo zvinonyanya kukoshakuitira kugutsikana kwevatengi, saka iwe unofanira kufungisisaicho chinokonzerwa nemari, nguva nemari uyeSarudza zvakanakisisa zvekuita kwako.
Isai Purogiramu Yokupedzisira
Nokuongorora kwezvimwe zviwanikwa,iwe zvino unogona kuva nechimiro chakasimba pane chinangwa cheikushandiswa, izvo zvichaita kuti vatori vechikamu vabatezvinodiwa. Imwe yenzira dzako dzose dzinofanira kumirakunze kwekugutsikana kwekambani nenguva. Usaitikukanganwa kuti une rusununguko rwekushandisa mazanamazano panguva dzakasiyana-siyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu akakunda. Kunyanya kukoshaZvinhu zvekuti zvibudirire ndezvechokwadi zvinoguma.
Sarudza Chitubu chemari
Bhizimisi rako rezvebhizimisi rinonyanya kupindirakuwana mari inoda. Icho chirevo chakajeka chechikonzero chekutanga uyechikonzero chekutora imwe sarudzo pamusoro pematambudziko ose. Inofanira kuva yakakodzerauye yakanyatsogadziriswa, iri nyore uye yakajeka yekusatenda uye, chero nzira ipi zvayo yekusaziva. Kunyanya kukosha,iwe unofanirwa kushandisa zvinyorwa zvisingasvibisi bhizimisi rako zvisina kunaka, somuenzaniso,mari yakakwirira, yakareba uye yakaoma mitemo yemitemo, mitemo yakanyanyasureties. Nguva dzose inokonzera kuongororwa kwezvinhu zvinodhura mari iyo ichaita nharo yemhando dzoseyezvipingamupinyi uye zvichiri kuwira mukati memiganhu yemari yako inotarisirwa kuwanikwa.
Shandisa Purogiramu Yako
Haisi nguva yako yakawandisa uye zvisizvokuti kuderedza zviitiko zvinotungamirira ku kurasikirwa. Saka, tora nguva udzoke zvose zvawaitakwemazuva apfuura, vhiki nemwedzi. Musarega ichi chichipinda mumakore asi kana chikadaro, itaIchokwadi kuti hausi kurega kana kuzvipira pakuzvidzivirira..Zvichida, pangave pane dzimwe nzvimbo uyeachiyambuka kuti aite. Paunowanikwa, usaparadza nguva, ita zvinodiwa uye usangane nechitsiko chinotevera.
Yenguva yekuita kuti ipfuure uye ichitambazvishoma nezvishoma nokuti hauzombozivi kuti chii chiri kumirira. Kunyange zvazvo shoko rokuti "urongwa hunokuponesa kaviringuva yakawanda panguva yekushandura "ndeyechokwadi, asi haina kumbosimbisa kukosha kwekukurumidza, saka toraiuye yakasimba. Izvi zvichakubatsira kuti udzokezve nokukurumidza kana pane zvimwe zvinhu zvisingafanoonekwizvinoreva kuti pakupedzisira, kusiyana kwebasa rakarongwa uye hurongwa hunoshandiswaichave yakanyanyisa uye inodzorwa.
Tarisa hurongwa hwako
Hapana bhizimisi rinobudirira rinoenda kunzekuongorora nekudzivirira. Ndicho chiratidzo chekusimudzira uye kuvimbiswa kwehutano. Chinangwa chekuongorora ndekutora matanho akakurumidza nokukurumidza sezvinobvira nokuti wekupedzisira inobva kuneurongwa, zvakaoma zvikuru kuti zvive kutonga, uye zvakanyanya kudhura bhizinesi rinowanikwa. Backloghutungamiri hunosanganisira hukuru hwakanyanya hwekutanga; Mubvunzo ndewokuti: uyo anofarira kupiwakunyanya kupfuura imwe? Uye chinhu chinotevera chinouya mupfungwa ndechokupesana.
Tora Mabasa Okugadzirisa
Chido chekuchengetedza mufananidzo uye mukurumbirayebhizimisi pamwe chete nezvimwe zvinhu zvakadai sekubhadhara, kugutsikana, uye kugadziriswa kwezvinhu zvinowedzerazviito zvekugadzirisa zvinodiwa. Zvibvumirano zvekugadziridzazve, kukanganisa nekugadzirisa kukanganisa kuchafanira kuvayakagadzirwa mukati menguva yakatarwa iyo inenge isingakanganisi nguva yose yebhizimisi.
Rega Vanhu Vakazive Bhizimisi Renyu
Shandisa shanduko dzevanhu, shoko remuromouye zvimwe zvose zvinoshandiswa pakuparidzira mabhizimisi ako. Izvi zvichasimbisa kutengesa uye kuwedzera mari munguvamari inowira zvishoma nezvishoma uye purogiramu ichawedzera munguva refu.
Pakupedzisira, usarega kuongorora nokutinyika yebhizimisi iyo inosimba zvikuru apo kushanduka hakudzivisiki. Iva nemagariro, ramba uchidzidza, uye ramba uchichengetakushandisa ruzivo uye unyanzvi. Kukura nekuwedzerwa kuchauya zvakasununguka, uye pfungwa yekuzvidzivirira ichakuchengetedza iwe.